Taliska AFRICOM ayaa soo saaray qiimeyn ku aadan weerarada ay ka fuliyeen Qaaradda Africa… – Hagaag.com
Taliska AFRICOM ayaa soo saaray qiimeyn ku aadan weerarada ay ka fuliyeen Qaaradda Africa…
Posted on 6 Maarso 2021 by Admin in World // 0 Comments
Warbixin qiimayn ah oo ka soo baxday Taliska Ciidamada Maraykanka u qaabilsan Africa ayaa faahfaahin ka bixisay weerarada ay ciidanka Maraykanku ka fuliyeen Qaaradda Africa iyo tirada khasaaraha ee soo gaadhay dadka rayidka ah ee la soo sheegay
Sida lagu sheegay Warbixintii ugu dambeysay ee qiimeynta khasaaraha rayidka oo ku ekayd 31kii Dec. 2020, Taliska Ciidanka Mareykanka ee Afrika ma helin warbixino cusub oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah wuxuuna xiray labo ka mid ah seddex kiis oo furan.
Warbixintan ayaa noqonaysa tii afaraad ee qiimeynta khasaaraha rayidka tan iyo markii Taliska Mareykanka ee Africa uu bilaabay sii deynta warbixinnada bishii April 2020 taasoo qeyb ka ah ballanqaadkeeda kordhinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka.
Taliska ciidmada Maraykanka ee Africa ayaa sheegay in dhawaan uu helay laba warbixin oo ku saabsan khasaaraha rayidka tan iyo markii la xiray warbixintan.
Warbixinadan cusubi waxay ka imanayaan laba weerar oo cirka ah oo la kala qaaday Jan.1, 2021 iyo Jan. 19, 2021. Labadan warbixin ee cusub ayaa hadda la qiimeynayaa waxaana looga hadli doonaa warbixin seddex biloodle ah oo mustaqbalka ah. Waxay ku qoran yihiin sidoo kale furan.
Sida ku xusan warsaxaafaded uu soo saaray Taliska ciidmada Maraykanka ee Africa, Bishii January, talisku wuxuu dhameystiray awaamiirtii madaxweynaha ee ahayd in ciidamada Mareykanka laga soo celiyo Soomaaliya oo la geeyo meelo kale oo ka tirsan Bariga Afrika.